Fantaro ny Fiainan’ny Vaoty, Vondrom-poko Iray Andalam-panjavonana Ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Mey 2017 5:43 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Nederlands, Español, Français, polski, Italiano, English
Saripika: Yury Goldenshtein, nahazoana alalana
Zara raha mihoatra ny folo ny isan'ny mandrafitra ny vondrom-piarahamonina Vaoty lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao, ao amin'ireo tanànakely miala ora roa ivelan'ny tanànan'i St. Petersburg. Ao anatin'ity vondrona andalam-panjavonana ity, dia efa azo isaina amin'ny rantsan-tanana ny isan'ny Vaoty mbola afaka miteny haingana amin'ny tenin-drazany. Raha manangom-baovao ho an'ny tranonkala rosiana “Bumaga,” i Victoria Vziatysheva mpanao gazety sy i Yury Goldenshtein paka sary, dia nitsidika ny iray amin'ireo tanànakely manakaiky ny Oala Finlandey ary nifampiresaka tamin'ireo taranaka Vaoty farany mbola velona.
Tokony ho 160 kilaometatra andrefan'ny tanànan'i St. Petersburg no misy an'i Luzhitsy. Rehefa tonga izahay dia maro ny fiara miantsona eo ivelan'ny fivarotana iray ao an-tanàna. Tokony ho trano hazo, kelikely 20 eo ho eo no milahatra manamorona ny arabe, anisan'izany ny trano iray manana lavarangana tafo lanitra midadasika iray sady manana rindrina vita amin'ny vato. Io no Mozean'ny Kolontsaina Vaotika — tokana tsy manam-paharoa ao Rosia.
Vehivavy blaondy iray no nivoaka ny fiara, nandeha an-tongotra nanatona ny varavaran-kazon'ny mozea, ary nanokatra izany. Manao akanjo mafana izy nitari-dalana anay ho ao amin'ny efitra iray tsy misy fanafanana, nanisaka harona maromaro fitoera-mofo boribory sy vilan-drony.
io i Marina Ilyina, mpitahiry ny mozea sady Vaoty ihany koa. Nianatra tany St. Petersburg izy, saingy niverina tany Luzhitsy avy eo, ary tao izy no nanira-tena hanavotra ny Vaoty tsy ho amin'ny faharinganana tanteraka.
“Valo sisa ny manana ny teny vaotika ho tenin-drazany. Misanda volamena araka ny lanjany ny tsirairay amin'izy ireo,” hoy izy nanazava, rehefa nitari-dalana anay tao amin'ny Mozea, izay vao naorina roa taona lasa izay (naorina araka ny fomba fananganan-trano Vaotika).
Araka ny lahatahiry fanisana farany indrindra, dia 64 ny isan'ny Vaoty tavela ao Rosia, ary misy vitsivitsy monina ao Estonia. Ny olana amin'io isa io dia mampiseho ireo olona manondro tena ho Vaoty ireo, rehefa anontaniana amin'ny fizakam-pireneny. Tsy fantatra hoe firy ny Vaoty (ary aniasan'izany ireo Vaoty madiorano) nametraka ny tenany ho “Rosiana,” na tsy tafiditra tao anaty fanisana fotsiny izao.
Tamin'ny fiandohan'ny taompolo 1940 no nahabetsaka mponina indrindra an'i Luzhitsy, raha nitombo tokony ho 550 eo ho eo ny mponina ao aminy. Amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 35-40 eo ihany ny mponina maharitra ao aminy, miampy mpitsidika sasantsasany monina mandritra ny fotoana mafana.
Teraka tamin'ny taona 1947, taorian'ny ady lehibe faharoa tao Luzhitsy i Nina Vittong. Nandany ny fahazazany tao izy. “Somary lehibebe ihany ny tanànakely tamin'izany. Samy manan-trano sy zaridaina ary biby fiompy ny rehetra. Maro ihany koa ny tanora tamin'izany. Nanao fandihizana izahay ary in-droa isam-bolana no nijerena sinema,” hoy i Nina taminay.
Tahaka ireo vondrom-poko hafa (toy ny Vespiana, Izhoriana ary Ingriana Finlandeys), dia niaritra ny mafy nandritra ny komonisma sy Vaoty. tamin'ny taompolon'ny taona 1930, nandidy ny teny finlandey sy ny mifanakaiky aminy rehetra ho fiteny tsy ara-dalàna ny fanjakana sovietika. Na dia mbola nanohy nifampiresaka tamin'ny teny Vaotika aza ireo efa lehibe, dia nitaiza ny zanany tamin'ny teny rosiana irery ihany ny ankamaroan'ny ray aman-dreny, mba isorohana amin'ny fanenjehan'ny polisy.
Na izany aza dia nitombo tao anatin'ny fahenoana ny teny Vaotika ny ankizy, ary maro no mahazo ny teny am-pihainoana. Ankehitriny, mora mahazo ny teny vaotika ireo Vaody mahatsiaro ny fiteny hatry ny fahazazany, saingy misalasala rehefa miteny vaotika mafy. “Maheno ny teny aho, saingy sarotra indraindray ny mamerina azy ireny. Rehefa manonona azy ireny aho dia hafa faneno,” hoy i Nina taminay.
Lovan-tsofina hatrany no nampitana ny teny Vaotika hatry ny ela, ary vao tao anatin'ny zato taona farany izy no nahazo rafi-panoratana, raha nampiasa ny abidia sirilika nasiam-panovana i Dmitri Tsvetkov, mpahay teny. Dia vao 13 taona monja izao ny abidia Vaotika ankehitriny mampiasa ny endri-tsoratra latinina.
Ankehitriny, tonga ao Luzhitsy hianatra ny fiteny ny vehivavy zokiolona avy amin'ny tanànakely Vaotika manodidina. Tontosaina hatrany ao amin'ny Mozea ireny lesona ireny.
Ny Mozean'ny Kolontsaina Vaotika. Saripika: Yury Goldenshtein, nahazoana alalana
Nikita Dyachkov, ilay lehilahy mampianatra ao an-dakilasy, no hita ho tanora kokoa noho ny mpianany. Manana fototra Izhoriana izy, ary noho ny fitiavana manokana no nianarany teny Vaotika. Ankehitriny izy sady mailaka no mahafehy ny fitsipi-pitenenan'ilay fiteny — zavatra tsy nianaran'ny ankamaroan'ny Vaoty tao amin'ny faritra mihitsy hatrizay niainany.
“Adinonao ny teny sasany nefa dia tsy manana na iza na iza azo anontaniana iana,” hoy i Taisia Mikhaylova, vehivavy iray hafa niaina tao Luzhitsy saika nandritra ny androm-piainany
Indrisy, tsy ny fitenenana fiteny voarara no fisedrana lehibe indrindra nahazo ny Vaoty tao amin'ny Firaisana Sovietika. Tamin'ny taona 1943, nafindra toerana ho any Finland avokoa ny mponina amin'ny tanànakely Vaotika sy Izhoriana rehetra ary nanao asa an-terivozona. Herintaona taty aoriana, navela hody tao amin'ny Firaisana Sovietika ry zareo saingy tsy mahazo miverina any ambanivohiny. nanorim-ponenana tany amin'ny faritra hafa tao Rosia ry zareo.
Tokony ho efa-taona i Zina Savelieva raha nafindra toerana ny fianakaviany. Tamin'ny taona 1954 izy sy ny havany vao nody an-tanindrazana. Na dia taorian'izany rehetra izany aza dia mbola noterena handao ny ambanivohiny ihany ny fianakaviany sy ny hafa maro, rehefa nosokajiana ho “olom-pirenena tsy azo antoka” noho ny fitenenana teny Vaotika. Vokatr'izany dia nifindra toerana tany Estonia nandritra ny valo taona indray i Zina sy ny fianakaviany.
“Nandray anay ho toy ny namana [tao Estonia] ry zareo — angamba noho ny fitovitovizan'ny fiteninay, na mety noho ny antony hafa,” hoy i Zina niteny moramora. Efa antitra izy ankehitriny, saingy mbola mahita tsara ny masony. Te-hijery ny zavatra tsara izy rehefa miresaka ny taloha: “Mahay mankasitraka ihany koa aho. Farafaharatsiny mba nianatra teny Estoniana aho,” hoy izy nitsiky.
Nilaza taminay i Marina Ilyina fa vondrona nikatona hatrany ny Vaoty, niaina akaikin'ny sisintanin'i Rosia ary niaina tao anaty vondrom-piarahamonina bitibitika ihany. Nitandro mandrakariva ny fomba ifotony narahiny ihany koa ireo Vaoty any amin'ireny faritra ireny.
“Nanana ny fomban-drazanay izay tena efa tranainy tokoa izahay. Ohatra, fony aho zaza, nandeha tany amin'ireny vehivavy antitra ireny izahay izay mitsabo ny aretina amin'ny ody. Roahin-dry zareo amin'ny ody ny mangana, ny aretin-koditra, ny areti-maso, ary mandeha ho azy daholo izany tao an'eriteritro—fa nanao izany daholo ny rehetra,” hoy i Marina taminay.
Tsy natao ho tsy ara-dalàna intsony ny kolontsaina Vaoty ankehitriny, ary malalaka ry zareo hamelona sy hanavotra araka izay vitany ny fomban-drazany. Isaky ny andro mafana, mankalaza ny fisiany i Luzhitsy, ary tonga hihaino ny hiram-bahoaka Vaoty taloha amin'ny tenin-drazany ny olona eo amin'ny manodidina.
Ny endrika lava kokoa amin'ity tantara ity dia hita amin'ny teny rosiana ao amin'ny tranonkala “Bumaga,” nosoniavin'i Viktoria Vyzatysheva mpaka sary ary ny sary dia an'i Yury Goldenshtein.